Semalt: A Nduzi maka Beginners Na Olee otú Iji Wụnye WordPress nkwụnye
Ntuziaka a ga-emetụta ndị na-eji wordpress.org. Maka ndị mmadụ na-eji wordpress.com, ọ gaghị ekwe omume ịwụnye plugins n'ihi ụfọdụ ike ya. Ọ dị mkpa ịmepụta webpress.com website iji nwee ike iji plugins. E nwere ọtụtụ ụzọ ndị nwere ike isi wụnye wp ngwa mgbakwunye. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịwụnye mgbakwunye WordPress site na ịchọ ya na njikwa ọchụchọ, site na ị na-ebugo ya ma ọ bụ wụnye ngwa wp na mgbakwunye FTP.
Soro atụmatụ ndị a sitere n'aka Artem Abgarian, ọkachamara kachasị elu site na Semalt , ị ga - enwekwa ihe ịga nke ọma.
1. Wụnye wp ngwa mgbakwunye site na iji Nchọpụta ngwa ntanetị
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe maka ịwụnye wp ngwa mgbakwunye bụ site n'ịchọ ya na njikwa ọchụchọ. Site na nhọrọ a, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ plugins nke dị na ndekọ nchịkọta WordPress. Ị nwere ike igodo na nyocha ọ bụla ịchọta ma chọta ngwa mgbakwunye nke ga-adịrị gị mkpa. Mgbe ị wụnye ya, WordPress na-ebudata ya ma debe ya maka gị. Mgbe usoro ahụ na-aga nke ọma, ị na-enweta ozi nkwenye nke ịgbalite ngwa mgbakwunye ahụ. Ị nwere ike ịlaghachi na ntinye ngwa ngwa.
Maka ngwa mgbakwunye ọrụ, ị ga na-echeta iji rụọ ọrụ ya..Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na plugins niile nwere ntọala dị iche iche. Nke a pụtara na e nwere ụzọ dị iche iche ha chọrọ ka a hazie. Usoro ndị a agaghị ekpuchi na nduzi a. Otu n'ime nkwekọrịta nke a bụ na ị nwere ike ịwụnye plugins free. Na ọnọdụ ụfọdụ pụrụ iche, ịnwere ike ịwụnye ngwa mgbakwunye adịghị na ndekọ a.
2. Wụnye wp ngwa mgbakwunye na iji WordPress Admin nkwụnye Upload
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịwụnye plugins akwụ ụgwọ na ebe nrụọrụ weebụ wp gị. Na nke a, njikwa ọchụchọ enweghị ike inyere gị aka. WordPress nwere ọrụ na-ebugote na mpaghara ebe ha nwere ike ịnwe ka ị wụnye ngwa mgbakwunye na njikwa ya. Ịkwesịrị ibudata ngwa mgbakwunye site na isi iyi mba. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịbanye na wp-admin taabụ, gaa na plugins ma tinye peeji ọhụrụ.
Site na nke a, ị nwere ike pịa bọtịnụ bọtịnụ bọtịnụ. Bulite faịlụ a na ndekọ PC gị. WordPress ga-bulite ma wụnye ihe mgbakwunye a maka gị. Dịka usoro ahụ dị n'elu, mgbe ịmechara ihe ịga nke ọma, ịnwere ike ịgbalite ngwa mgbakwunye ma ọ bụ laghachi na ibe plọg. Ntọala niile ahụ bụ omenala maka imewe ngwa mgbakwunye.
3. Iji aka Wụnye WordPress ngwa mgbakwunye iji FTP
N'oge ụfọdụ, ọkachamara na wp gị nwere ike ịnwe ụfọdụ ihe mgbochi faịlụ nke nwere ike ịkwụsị ime mgbanwe nke ịwụnye mgbakwunye site n'ógbè ha. Na nke a, itinye wp ngwa mgbakwunye site na FTP bụ nhọrọ kacha mma. Ọbụna ndị mbido nwere ike ịchịkwa njikwa FTP. Nke mbụ, ị kwesịrị ibudata na wepụ faịlụ zip nke ngwa mgbakwunye gị na kọmpụta gị. Site na nke a, enwere ike ibudata ngwa mgbakwunye gị na ihe nkesa wp gị na-eji FTP ahịa. Onye na-enye gị wp nwere ike inye onye njikwa FTP maka ebe nrụọrụ weebụ gị. N'otu oge na njikwa FTP, ị nwere ike itinye ya na ụzọ / wp-content / plugins / directory of your server.